Hordhac: West Ham Vs Chelsea: Rikoodhka Blue Ee Garoonka London Staduim Oo Aan Fiicnayn – Kooxda.com
HomeHordhacHordhac: West Ham Vs Chelsea: Rikoodhka Blue Ee Garoonka London Staduim Oo Aan Fiicnayn
Kooxda Chelsea ayaa marti u noqon doonta kooxda West Ham kulan ka dhici doona garoonka London Stadium kana tirsan horyaalka Premier League todobaadkii 32-aad.
Chelsea ayaa kulanka soo galaysa iyaga oo uu cadaadisk ku saaran yahay in ay guul ka gaadhaan West Ham kadib markii ay Man United ku soo dhawaatay kadib guushii Brighton.
Dhanka kale kooxda West Ham ayaa kulanka u soo galaysa in ay ka baxsato boosaska looga hadho premier League iyaga oo kaliya u jira hal dhibic booska 18-aad.
Kulanka: West Ham Vs Chelsea
Ka dib guushii 1-0 ee ay ku gaareen Stamford Bridge bishii November, West Ham ayaa raadineysa in ay markii 2-aad guul ka gaadho Blues 2 kulan xilli ciyaareed kaliya tan ilaa xilli ciyaareedkii 2002/2003.
Kadib markii ay gool dhaliyeen 11 kulan oo xidhiidh ah oo ay West Ham kula ciyaareen garoonkeeda intii u dhexaysay 2006/2007 chelsea ayaa ku fashilantay in ay gool dhaliso labadii kulan ee ugu dambeeyay ee ay booqatay West Ham.
West Ham ayaa laga badiyay dhamaan seddexdii kulan ee ay ku ciyaareen London Derby ee premier League xilli ciyaareedkan laakiin waligood 4 kulan oo London Derby ah guuldaro lama kulamin xilli ciyaareed kaliya tan ilaa 1989.
Chelsea ayaa guuleysatay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League ee London Derbie markii ugu dambaysay ee ay 4 kulan oo xidhiidh ah badiyaan Kulamada London Derby ayaa ahayd intii u dhexaysay April ilaa November 2009.